Qalabka SD-P09 ee si buuxda otomaatiga u ah keydinta tamarta sifeynta leh wuxuu adeegsadaa Jarmalka Siemens PLC nidaamka xakamaynta barnaamijka si loo xakameeyo howlaha dhammaan habraacyada shaqada, Qalabka waxaa lagu soo bandhigayaa waxqabad joogto ah, tikniyoolajiyad horumarsan, hawlgallo sahlan oo waxtar leh iyo sidoo kale otomaatiga heerka sare ah. .
Khadka wax soo saarka ee DYR-2017 wuxuu ka kooban yahay nidaamka wax bixinta, nidaamka tamarta, nidaamka sameynta, kormeerka iyo xirxirida.
Nidaamka sahayda saxarka wuxuu qaataa tamarta keydinta sare ee tikniyoolajiyadda is-socodka, taasoo yareyneysa 10% isticmaalka korontada iyo isticmaalka balwadda kiimikada.
Mashiinka ugu weyn wuxuu qaataa Siemens motor wuxuuna qaataa tiknoolajiyadda Jarmal ee injineernimada cadaadiska, oo leh cadaadis sarreeya iyo isticmaalka tamarta oo hooseeya.
Caaryadu waxay qaadataa Alloy Aluminium Aluminium ah oo awood u leh Qalabka Teknolojiyada Patent kaas oo waara oo leh saxnaan sare. Qalabka caymiska laba-geesoodka ah wuxuu si fiican u ilaaliyaa caaryada wuxuuna u dhaqmaa sidii keyd si looga hortago waxyeelada saameynta caaryada
Marka la barbardhigo mashiinnada kale ee otomaatigga ah ee semi-automatic, mashiinnada miisaska mashiinka wax lagu duubo ee Bariga Fog oo si otomaatig u shaqeynaya ayaa diiradda saaraya faahfaahinta, iyaga oo leh wax soo saar sarreeya iyo adeegsiga tamarta oo hooseeya.